China Kids PU Raincoat orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Senlai
1. Ny iray amin'ireo vokatra lehibe eto aminay dia ny palitao PU, ny ankamaroany aondrana any amin'ny firenena avaratra, ny Oceania ary ny faritra hafa. Ny palitaon'ankizy dia mizara akanjo sy akanjo iray. Misy ny matevina ary ny mahia.
2. Ny toetra mampiavaka ny volon'ondry dia tena manandanja ihany koa. Taorian'ny andiam-panodinana, ny mazava dia mazava tsara, tsara elastika, tsy mora mitranga pilling, volo very sns. Amin'ny ankapobeny aorian'ny fitsaboana manokana, ny fleecy dia mety manana anti - static, retardant flame ary toetra hafa, manatsara ny fiarovana ny lamba. Ny lamba volom-bovoka dia azo afangaro amin'ny lamba rehetra, ity fampisehoana ity dia afaka manatsara bebe kokoa ny asany mafana sy ny hafa. Ny lamba volon'ondry mihozongozona dia mahatsapa tena malefaka. Ho fanampin'izany, dia afaka mamorona lamina samihafa arakaraka ny filan'ny tsirairay.
3. Ny loko dia mety manankarena sy miloko, ary voajanahary sy malama kokoa izy io. Ny kinova manify dia vita amin'ny PU sy ny lamba fototra. Ny lamba vita amin'ny fototra dia azo vita amin'ny lamba mpamatsy notondroin'ny mpanjifa.
4. Misy karazana palitao roa, ny iray dia palitao sy mpampiakanjo, ny iray kosa palitao sy pataloha. Ny pataloha brace dia ny fampiasana ny fomba anaovan'ny buckle buckle ny fehin-kibo vita amin'ny elastika eo amin'ny toeran'ny soroky ny vatan'olombelona, mora ny mitafy. Ary ny pataloha valahana fisaka mampiasa ny toeran'ny valahana ho an'ny faka faka matevina, ny elastika iray ihany.
5. Ny fomba fanidiana ny palitao eo am-bavan'ny tongony dia mampiasa ny zipper miloko, izay azo vita amin'ny akora tsy tantera-drano mba hiantohana ny fiasan'ny akanjo amin'ny orana sy ny orana.
6. Ny tombony amin'ny lamba PU dia: vita amin'ny fibra matevina avo lenta, miaraka amin'ny toetra mitovy amin'ny hoditra; Mandritra izany fotoana izany, lanja maivana, henjana mafy, miaina, tantera-drano, tsy mora manitatra sy fiarovana ny tontolo iainana, toetra ara-batana tsara, fanoherana miolakolaka, malefaka, tanjaka am-pahefana, miaraka amin'ny hafanan'ny rivotra.
Teo aloha: Kitapo fatoriana an-jaza
Manaraka: Skisuit an'ny ankizy
Akanjo ranonorana manazava ny ankizy
Akanjo lava orana an-jaza
Akanjo Rainana Ankizy
Akanjo an-tsekoly an-tsekoly